Ciidamada Dowladda Federaalka iyo AMISOM Oo la wareegay Deegaanno ay ka mid yihiin ceelbaraf – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidamada Dowladda Federaalka iyo AMISOM Oo la wareegay Deegaanno ay ka mid yihiin ceelbaraf
MAREEG 24 February 2016
Mahadaay ( Mareeg)-Guddoomiyaha Maamulka Degmada Mahadaay ee Gobolka Shabeelaha Dhexe Axmed Xuseen Afrax ayaa ka warbixiyay Ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya iyo AMISOM oo barqanimadii maanta la wareegay Tuulooyin hoostaga degmadaasi.
Meelaha ay Ciidamadu la wareegeen sida Guddoomiyaha uu xaqiijiyay waxaa ka mid ah Tuulooyin ay ka mid yihiin Ceelbaraf iyo kuwa kale oo ku dhow dhow oo dhmmaan hoostaga degmada Mahadaay ee Gobolka Shabeelaha Dhexe.
Ku dhawaad 7 Sano ayaa Al Shabaab waxa ay maamulayeen Tuulooyinka maanta lagala wareegay ee Gobolka Shabeelaha Dhexe waxaana durba gaaray qaar ka mid ah goobahaasi lala wareegay Sarakiil uu ka mid yahay Abuunduulaha Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed.
Ma jiro wax war ah oo Al Shabaab ay ka soo saareen ka bixitaankooda Tuulooyinkaas la soo sheegayo ee dhaca Shabeelaha Dhexe.
Ilka-xanaf: “Ma jiro Ururka Iskaashatooyinka Qaranka”